थाह छैन ... तं प्रयास गर्छस त ... छीराएर हेरन ... शायद छिर्दैन होला ... ! - Desi Sexy Stories MenuHomeForumSubmit Your Stories
MenuHomeIncestBro Sis Incest StoriesDad Daughter Incest StoriesFamily Group Incest StoriesGay, Lesbian Incest StoriesIncest Pregnant StoriesMom Son Incest StoriesOther Relations Incest StoriesCelebrity NudeRapeHumilation sex storiesNudes PhotosDesi Bhabi NudeDesi Nude PhotosNude photosEnglishDesiOfficeTeacher Ke Saath Sex StoriesCelebritywifeCouple Sex StoriesGirlfriend sex storiesHindi sex storiesMaid Servant sex storiesNaukar/Naukrani sex storiesSchool College Sex StoriesGroupExtreme Photos	Home » Nepali Sex Stories » थाह छैन … तं प्रयास गर्छस त … छीराएर हेरन … शायद छिर्दैन होला … !
थाह छैन … तं प्रयास गर्छस त … छीराएर हेरन … शायद छिर्दैन होला … !
मेरो नाम अनिता हो । म २२ वर्षकी भएं । म डिगरिमा पढ्छु । क्याम्पियन कलेजको घटनाबारे तपाईहरुलाइ थहै छ होला । म त्यहि बाताबरनमा हुर्केकी केटि हूं । मेरो एउटा भाइ छ । क्या ह्यान्सम छ भने । मोरालाइ देखदा मेरो त मनै कस्तो कस्तो हुन्छ । कहिलेकांहि त छ्या आप्नै भाइको बारेमा के सोचेकी हूंला जस्तो लाग्छ । उ १८ वर्षको छ । डनबस्कोमा पडछ । बुबा सरकारी जबमा हुनुहुन्छ । उहाँ प्राय बाहीरै बस्नु हुनछ । घरमा ममी म र भाइ बस्छौ । तलका कोठाहरु बहालमा लगाएको छ । तलको तलामा भानछा कोठा छ । बिचमा मेरो र भाइको कोठाके बिचमा ड्रइङ रुम छ । ममी अर्कै कोठामा सुत्नु हुन्छ । टिभी ड्रइङ रुममै राखेको छ ।
एक दिन बेलुका के काम परेर भाइको कोठामा गाको त……………………..मेरी बास्सै मरी गएं नी । मोरा त आफ्नो यत्रो सामान निकालेर खेलाउंदै रछ । मेरो त मन ढक्क फुलेर आयो । ऐ…………के गरेको यस्तो भन्दै म हत्तनपत्त लाजले बाहिर निस्कें । त्यसलाइ पनि लाज लागेछ क्यार । म निस्कने बितिकै ड्याम्म ढोका बन्द गरो । कोठामा आएर तेसकै बारेमा सोच्दै थे । मोराको सामान त कत्रो रैछ । मेरोमा छिराउन पाए पनी हुन्थो जसतो लागो । एकछीन पछी आएर दिदी प्लिज ममिलाइ नभन्दे है भनेर म्याउंम्याउं गर्न थाल्यो । दिदी ममिलाइ नभन्दे है म तैले भनेको जे पनी मान्छू भनेर मेरो हाततिर सुमसुमाउ थालो ।मलाइ माया लागो । मेरो मनले भने फेरी तेलले आफ्नो सामान निकाले पनी हुन्थो जस्तो लागीरहेको थियो । मोरा अनि ढोका नलाइ त्यस्तो गर्छन त ? गाली गरेजस्तो गरेर च्याप्प समाएंर गालामा टोकीदें ।
भन्दीन, जा गएर सूत । भनेर पठाएं । त्यो दीन मेरो मन रातभरीनै चन्चल भो । सबै लुगा खोलें र नांगै सूतें । आफ्नो दूध आफै माडें । ओउँला हालेर हस्तमैथुन गरें । त्यसपछी का दीन त मेरो लागी झन बेचैनीले बीत्न थाले । जहीले पनी भाइ अगाडी आउंथ्यो नजर त्यसको सामानमा पुगी हाल्थ्यो । त्यो पनी मलाई आशलाग्दो नजरले हेर्छ जस्तो लाग्न थाल्यो । के गर्दो रैछ भनेर एक दीन बाथरुममा नुहाउन जांदा मैले बाथरुमको ढोका खुल्लै छाडेर नांगै नुहाउन थालें । आज थाह पाएं म नुहाउन थालेपछी त्यो त की होलबाट चीहाएर हेर्दो रहेछ । आज बाथरुम को ढोका खूल्लै थियो त्यसले अलिकती ठेलेपछी त खुली गयो । मैले पनी था नपाए जस्तो गरेर दूध मोलीमोली नुहाएं । योनीतीर हात लांदा यसो कर्के आंखाले हेरेको त त्यो त के गरुँ र कसो गरुँ भा छ रहेछ । गोली ठीक ठाउंमा लाग्यो भनेर मख्ख परें ।
राती ममी तल भान्सामा गएको बेलामा के गर्दैछ । आज भने जाल हान्नु परो भनेर त्यसको कोठामा गएं । कोठामा त्यो त मोबाइलमा शायद पोर्न भिडियो हेर्दै थियो होला म जाने बितीकै मोबाइल सिराने तीर हालीहालो । जाडोको बेला थीयो ।
“ए के हो खै ” भनेर मैलै मोबाइल खोसें । भरखर हेरेको क्लीप रन थीयो । “पख तं यस्तो राख्छस ममीलाइ आजचैं नभनी कां छाड्छु र” भनेर त्यस को मोबाइल बोकेर हीडेजस्तो गरें ।
ए पख ममीलाइ भनीस भने मार दीन्छु भनेर झम्टेर आयो । म पनी भागे जस्तो गरें । ऊ मलाइ खेद्दै आएर च्याप मेरो हात समातेर मोबाइल खोस्न थाल्दा मैले जानीजानी दूधले उस को जीउमा धक्का दीएं । अघी देखीनै मोबाइलमा ब्लु फील्म हेरीरहेको उसको उत्तेजना म अझै बढाउन चाहन्थें ।
मलाइ पनी हेर्न दे है त । उससंगको कृतीम लडाइमा हारे जसतो गरेर मैले मोबाइल फिर्ता दीदैं भने । तं पनी हेर्छस र छ्या नहेर उ फुत्कन खोज्यो म भने मुडमा थीएं । मैले आजचैं जसरी भा पनी रुपेशको दरो सामानको मजा लीन्छु भनेर सोचीसकेको थीएं । के हून्छ त तैले हेर्दा हून्छ मैलै हेर्दा हूंदैन भनेपछी हामी दुबै जना ओछ्यानमा गयौं । दिदि एउटा कूरा भन्छू तं नरिसाउने भा उसले भनो ।
“मैले बीहान तैलैं नूहाएको देखें नी ।”
“मलाइ थाह थीयो तैले हेरेको”
“तलाइ लाज लाजेन”
“के को लाज अस्ती तैलैं मलाइ आफ्नो डन्डा देखाको हैन”
“त्यो त तैलैं हेरेको थीस भन्ने मलाइ के था त”
“भो भो गफ न दे तं पनी मेरो जीउ हेर्न खुब खोज्छस मलाइ सब था छ ।”
उ अली लजाए जस्तो गरो ।
“अब के लजाउंछस ल मलाइ तेरो मोबाइलको फील्म देखा” मैले उसको बाटो खोली दीएं ।
उस ले मोबाइलमा ब्लू फील्मको क्लीप खोल्यो ।
“हेर दिदि यो क्याम्पियन कलेजको ।” कलेज ड्रेसमा रहेकी एउटी केटीलाइ पछाडीबाट सम्भोग गरेको त्यो क्लीप मैले पनी निताको मोबाइलमा हेरी सकेको थीएं । तैपनी मैले आज भाइसंग हेर्ने मौका पाएको थीएं । दुबै जना ब्ल्यांकेट ओडेर बसेका थीयौं ।
“खुब मजा हुँदो है- दिदि” रुपेशले भन्यो ।
“मलाइ के था त । मैले यस्तो गरेको भा पो त ।” मैले कैले नगरेजस्तो गरेर भनें । मनमनै भने तलाइ के था कती मजा आउंछ भन्ने कुरा । आज तलाइ मजा चखाउंछु भन्ने लागिराको थीयो
“ए तेरो डन्ठा देखान अस्ती मजाले हेर्नै पाइन” मैलै भने ।
“पख है त” भन्दै उसले आफ्नो लठ्ठी जस्तो सामान निकालो ।
“आमूइ कत्रो र छ” मैले आश्चर्य चकीत हुंदै भने । हातले च्याप्प समातेको त तातेको फलाम जस्तै भा रैछ ।
“दिदि तेरो दुध पनी चलाउन दे न ।” रुपकले भन्यो ।
ला भनेर ब्रेसीयरको हूक खोलीदीएं । त्यो अनाडी त वीस्तारो छुए जस्तो पो गर्न थालो ।
“मैले ए मोरा यसरी हैन क्या । मजाले माडनु पर्छ । भोली बुहारीको पनी यसरीनै छुइस मात्रै भने त भाग्छे नी ।” भनेर उसको हात समातेर आफ्नो पन्जाले चार पांच पटक थीची दीएं । अब उ पनी मजाले चलाउन थाल्यो ।
उतेजीत हूंदै उसले दिदि “मेरो खेलाइ दे न । कस्तो मजा हूदो रैछ । केटीको दुध माडन त” भन्न थालो ।
मैले च्याप समातेर खेलाउन थालें । जती जती हल्लाउंदै जान्थे त्यतीनै मेरो उत्तेजना बढ्दै थीयो ।
“ए अनु……………..ए रुपेश तीमीहरु के गर्दै छौ हँ ।” तलबाट ममिले कराउनु भयो । ला बुढियाले था पाइन की क्या हो भनेर मन ढक्क फुल्यो ।
ल अब भूजा खान आयो ।
ल भयो हीन भूजा खान । अनी आएर गरुमला ।
भनेर मैले ब्रेसीयरको लगाएं ।
खाना खादै गर्दा ममी उफ अनू आज कस्तो टाउको दुखी राछ । भन्न थाल्नु भयो । मैले ममि म भांडा माजी हाल्छू नी हजूर आराम गरिस्यो । भनेर बुढियालाइ फकाएं ।
खाना खाएर यसो सोचें बुढियाले हाम्रो खेल था पाईन भने त मार्छीन । अनी मैले बुबाको ‌ओषधीको प्याकेटमा हेरे स्लीपीङ ट्याबलेट रछ । अनपढ बुडियालाइ के था । अनी ममिको कोठामा गएं । ममि सुतीस्यो । छैन हेर न कस्तो टाउको दुखीराछ थीच्देन । ममिले भन्नुभयो ।
मैले आ ममि थीचेर के हुन्थ्यो ल ओषधी खाइस्यो भनेर स्लीपीङ ट्याबलेट दीएं । खै के हुन्थ्यो यो ओषधीले ममिले भन्नुभयो । मैले आराम गरिसो न । म टिभि हेर्छु भनेर गएं ।
एकछीन सीरीयल हेरें । रुपेश आयो । मैले आंखा सन्काएं । अनी हामी दुबै जना रुपेशको कोठामा गयौं । ए रुपेश तेरो सामान भनेपछी उसले जिन्स पाइन्टको चेन खोलेर रनक्क रीसाएको सामान झीको । मैले पूरै पेन्ट खोल्न भनेपछी उसले खोल्यो मैले उसको सामान मुखमा हालेर मुख मैथुन गर्न थालें ।
दीदी प्लीज तेरो पनी देखा न भन्न थालो । मलाइ पनी अब छीराइ दे हुन्थ्यो भन्ने लाग्न थालीसकेको थीयो । मैले स्कर्ट मास्तिर फर्काएं ।
खुट्टा फैलान रुपेशले भन्यो । मैले तिघ्रा फैलाइदीएं । दुइचिराका बिचमा एउटा प्वाल । त्यो त मजाले हेरेको हेरै गर्न थाल्यो । अनी आफ्नो दुइ वटा अउँला ल्याएर भीत्र पसायो । मैले हात हटाइ दीएं तर मैले नहटाओस भन्ने चाहेको थीए ।
ल भयो अब जान्छु सुत्न भन्दै म उठें । दीदी प्लीज नजान । उसले मलाइ आफूतीर तानो । अनीता तिमिहरुको प्वालमा कसरी छीर्छ हँ ? उसको यो प्रश्नले मलाइ बडो आनन्द आयो । म पनी यहि चाहन्थें ।
” थाह छैन … तं प्रयास गर्छस त … छीराएर हेरन … शायद छिर्दैन होला … !” मलाइ पनी थाह थीयो उसलाई पनी थाह थीयो … किन पस्दैन थीयो होला र।
“त्यसो भए म के गरुँम् त … कसरी पसाउने …? ”
“यसो गर तं ममाथी चढेर तेरो लीङ्ग मेरो योनीमा राखेर कम्मरले ठेल जान्छ कि…लु आइज चढ… !” मनमनै मलाइ आनन्द हुन थालीसकेको थीयो ।
उ त अगी देखी नै नांगै थीयो । मैले पनी आफ्नो स्कर्ट खोली सकेको थीएं । उ माथी दढेर एक पटक हुत्त पारो के छिर्दैन थियो । मेरो योनीले टन्न पानि फ्यांकेको थीयो ।
अबुइ दीदी क्या मज्जा हूदों रैछ ।
पख तेरो पुरै पसेको छैन अली बल गर । उ माथी सुतेर धक्का मार्न थाल्यो ।
” आहह … रुपक … कती मजा आयो … गर गर छीटो गर मलाइ मजा दे … भित्र बाहिर गर अरु अरु हान्न हान … ”
उ मच्चीन थाल्यो । मलाइ खुब मजा आइ रहेको थीयो । उ पागल जस्तै भएर घरी मेरो गाला घरी मेरो ओठ घरी गर्दन चुमी रहेको थीयो ।
दुध पनी मोलीरहेको थीयो ।
स्यां स्यां ए दिदि मजा आयो क्या मजा हूदो रैछ
मलाइ पुरा मजा आइरहको थीयो । उ मच्ची रहेको थीयो । उ अनाडिजस्तै छीटो छीटो धक्का मार्दै थीयो ।
“दिदि … दिदि…मेरी प्यारी अनु आह… … … …हा … …हा” गर्दै थीयो । यसको डन्ठाले पीच्कारी हानी गो ।
मलाइ भने पुगेकै थीएन । अब के गर्ने होला
तैंले त खत्तम पारीस नी मलाइ… … … …
उ पनी पछुताउमा थीयो
ला दिदि नहुनु भइगो … … …
हैन मैले त्यो भनेको हैन । मलाइ पुरा मजै आएन । तेरो बिर्य झरि गयो ।
ए दिदि फेरी उठ्छ होला । मैले हस्तमैथुन गर्दा तिन चार पल्टसम्म निसकिन्थियो ।
हो र … … फेरि सक्छस त
म खेलाउंछू है त
हैन मै खेलाइ दिन्छु … … … … भनेर मैले उसको लीङ्ग खेलाउन थालेको त फेरी उठ्यो
रुपेश अब भने हतार नगरी कन विस्तारै समय लगाएर गर है … … भने
उसले त्यसै गरो । नभन्दै उसले मलाइ तिन पटक पुरा समय लगाएर सम्भोग गरो ।
यस्तो आनन्द त कहीले आएको थीएन ।
अब फेरी फरी पनी गरुंम है दिदि … …
ल ल अब सूत
राती ३ बजे मात्रै हामी सुतेउं ।
भोली पल्ट तल्लो पेट कटकटी खायो । योनीमा पनी पोली राको थीयो । बेलाबेलामा दिदि भाइ सुत्ने गर्छौं । कसैलाइ शंका हुने कुरै छैन । अर्को महीना महीनाबारी भएन । कहीलेकांही त तलमाथी हुन्छ तैपनी मलाइ शंका लागेर चेक गराएं । थ्याङक गड पेट बसेको रैन छ । आजकल भने म अली सतर्क भएकी छू । Tweet
SEX WITH STUDENT IN TUTION -NEPALI SEX STORY	Neighbour ko Kt lae chikeko	उनको प्यास बुझाए मैले	About The Author